सपनामा म’रेका मा’निस देखिन्छन् किन ? सपनामा म’रेको मान्छे देख्दाको फल यस्तो सम्म (भिडियोसहित),,,हेर्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सपनामा म’रेका मा’निस देखिन्छन् किन ? सपनामा म’रेको मान्छे देख्दाको फल यस्तो सम्म (भिडियोसहित),,,हेर्नुहोस।
युवा ज्योतिषी केशव गौतम।नमस्कार, सबैमा सधै जसो यसपटक पनि तपाइको सेवा’मा हामी ज्योतिष, वास्तु र ग्रहगोचर सम्बन्धि समाग्री लिएर उपस्थित भैसकेका छौँ । आशा छ यस पटकको सामग्री पनि तपाइलाइ अवश्यनै मन पर्ने ने छ ।
आउनुहोस् सप’नामा म’रेका मा’निस देखिन्छन ? भन्ने विषयको सामग्री शुरू गर्नु भन्दा पहिला यो म’न्त्र उच्चा’रण गरौँ: ग्रामे वायदि’वारण्ये ये सर्पप्रचरन्ति। न’मोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।९।।
जीवन र मरण जीवनको स’बभन्दा ठूलो सत्य हो । जन्मिने मान्छे मर्नैपर्छ । आफूनजिक रहेका मृ’त व्य’क्ति कहिलेकाहीँ सपनामा आउँछन । यस्तो अनु’भव अ’नौठो रहस्य’मय हुन्छ । मनोविज्ञानका अनुसार सपनाहरूमा विशेष सन्देश लुकेका हुन्छन ।
सपनामा देखापरेर मृत व्यक्ति’हरूले निर्देशन वा आश्वासन दिन्छन । पछि हुने कुनै नराम्रो घटनाका बारेमा सा’वधान पनि गराउँछन । सपनामा लुकेका सन्देश बुझ्दा मान्छेले जीवन परि’वर्तन गर्न सक्छ।
यस्ता सपनाहरूमा उठ्’ने भाव’ना ती’व्र र ज्व’लन्त हुन्छन । सपना देख्नेले आफू वास्तविकता बाँचिरहेको छु भन्ने ठान्छ । कहिलेकाहीँ त निद्रा खु’लेपछि पनि मानिस सप’नाको प्रभा’वबाट बाहिर निस्कँदैन।
पुरा जानकारीका लागि यो भि’डियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्:
Previous १० लाख र ५ तोला सुन लिएर फरार श्रीमान बहिनीकोमा लुकेको भेटियो, अर्की युवतीसँग मस्ती,रुवाबासी चल्यो(भिडियोसहित),हेरौं
Next आर्थिक सहयोग नगरेपनि स्यावा’सी मात्र दिए पनि काम गर्न अझै हौसला मिल्ने थियो’, सपना रोका मगर ( भिडियोसहित),,हेर्नुहोस
स्वास्थ्य मन्त्री तामाङ भन्छन्, “खोप छिट्टै आउँछ, यति-उति दिनचाहिँ भन्न स’क्दिनँ” ( भिडियोसहित)